Fanolorana, fiaraha-miasa ary fanentanam-panahy - mpanao asa an-tapitrisany
Fankatoavana, fiaraha-miasa ary fanentanam-panahy
11 taona ny traikefa
Tetikasa 1000 +
Ny Filankevitra iraisana ho an'ny fiahiana ho an'ny mpifindra monina
Ny Fikambanan'ireo Mpanolotsaina ho an'ny fiadanan'ny mpifindra monina dia fikambanana tsy miankina an-tsitrapo mahaleo tena, manentana ny fahamarinana ary miady amin'ny fanavakavahana amin'ny lalàna mifindra monina sy ny fialokalofana.
Ny fikambanan'ireo mpanolotsaina mifindra monina mifindra
Ireo Mpanolotsaina momba ny fifindra-monina dia mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ireo Mpanolotsaina fifindra-monina mifehy ny fahazoan-dàlana ho fikambanana mpanolo-tsaina ho an'ny Mpanolotsaina mifindra monina ao amin'ny United Kingdom. Tanjon'ny Fikambanan'ireo mpanolotsaina mifindra monina dia ny fampiroboroboana ny matihanina amin'ireo mpanolotsaina rehetra mifehy ny fifindra-monina ary manangana fiaraha-miasa / fandrindrana ary manatsara ny fifandraisana eo amin'ireo vondron'olona fantatra, fikambanana ary andrim-panjakana rehetra.
Fikambanana ho an'ny fitantanana olona
Ny matihanina HR dia mpikambana ao amin'ny Society ho an'ny fitantanana ny harena ho an'ny olombelona ary manaraka ny fomba fanao tsara indrindra manodidina an'i Globe.
Fikambanana Teknolojia momba ny fampahalalam-baovao any Canada
Fanampiana ara-dalàna sy fifindra-monina any Angletera
Mpiasa an-tapitrisany sy mpiara-miasa amintsika no miasa amin'ny anaran'ny sy eo ambany fanaraha-mason'ny Mpisolovava EEA amin'ny fanarahana ny Andininy faha-84 amin'ny lalàna momba ny fifindra-monina sy ny fialokalofana 1999. Miara-miasa amin'ireo mpanolotsaina momba ny fifindra-monina UK izahay mifehy ny Office of the Immigration Services Commissioner (OISC). Ny OISC dia tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ireo mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina eo ambanin'ny fitsipi-pifehezana sy fitsipika mifehy ny Kaomisiona.
Fanampiana tsy mifindra monina sy mpifindra monina amerikana
Ireo mpisolovava mahay eto Etazonia dia mpikambana ao amin'ny American Bar Association ary mpikambana ao amin'ny The American Immigration Lawyers Association (AILA), natsangana tamin'ny 14 Oktobra 1946 ary fikambanana mpanao bara an-tsitrapo miaraka amin'ireo mpisolovava sy mpampianatra lalàna 15.000 izay mampihatra sy mampianatra ny lalànan'ny fifindra-monina.
Fanampiana an'ny fifindra-monina any Aostralia
Ireo Mpanolo-tsaina Aostralianina sy mpisolovava antsika dia voasoratra anarana ao amin'ny Migration Agents Regisation Authority (MARA) izay rafitra fisoratana anarana ofisialy ho an'ireo mpanolotsaina mpifindra monina Aostraliana araka ny takian'ny lalàna Australiana.
Ny Mpanolotsaina mifehy ny fifindra-monina any Canada
Ireo mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina Kanadiana izay manome serivisy fifindra-monina ho an'ny mpanjifantsika dia mpikambana ao amin'ny Conseil Immigration an'ny Canada Regulate Council. Mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina any Kanada (ICCRC) (Conseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada (CRCIC)) no manampahefana manerantany mifehy ny firenena izay noforonin'ny Governemanta Kanada mba hanara-maso sy hiarovana ny mpanjifa mila serivisy an'ny mpanolo-tsaina mpifindra monina Kanadiana.
Fikambanana toro-hevitra amerikana latina
Ny mpiara-miasa aminay miasa any Amerika Latina dia mpikambana ao amin'ny LACCA. Ny Fikambanana Mpanolo-tsaina Amerikana Latina dia miara-miasa amin'ny torohevitra ao an-trano miasa ao amin'ny faritra, manome azy ireo fahafahana hifanerasera, hizara hevitra ary fomba fanao tsara indrindra ary tamba-jotra amin'ireo mpiray tanindrazana manerana an'i Amerika Latina.
Ny tanjon'ny Legal Legal Service dia ny hanome fiarovana ara-dalàna ny olompirenena, fikambanana ary orinasa.
Mpiara-miasa stratejika amin'ny Internet
Misaotra manokana hanaterana ny Plus, noho ny fanohanan'izy ireo sy ny fitokisanay.
Miara-miasa amin'ny votoaty
Vao avy niresaka momba ny Accreditations sy Partnerships vitsivitsy isika.
Noho ny antony matihanina, dia tena sarotra ny mampahafantatra ny mpiara-miasa rehetra, nefa, izahay dia manolo-tena hanome anao tolotra sy serivisy tsara indrindra, mba hahatratraranao ny tanjonao, ny hetahetanao ary ny iraka ataonao, saika na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao amin'ny vidiny mifaninana indrindra. firafitry ny sarany.
* Fanamarihana Izahay dia tsy manaiky andraikitra izay misy fisalasalana kely azontsika omena ny antoka tsara indrindra amin'ny serivisy.
Nandray fanandramana taona maro izahay nanatanterahana ny asa manokana sy fikambanana iraisampirenena sy fiaraha-miasa amin'ny fanomezana serivisy sy vahaolana tsara ho an'ny mpanjifantsika amin'ny vidiny Kely.
Manangana fahafahana ho an'ny tsirairay sy ny orinasa izahay haka rafitra tsara kokoa, namboarina ary namboarina vahaolana.
Momba ANAO. Hifankahalala bebe kokoa aminao izahay, ny orinasanao ary ny tanjonao alohan'ny hiresahana ireo safidy mety na fotoana mety.
Amin'ny alàlan'ny traikefa be anay sy ny serivisy isan-karazany nomen'ny orinasa anay, dia manampy ny olona tsirairay, fianakaviana, orin'asa ary orinasa izahay amin'ny alàlan'ny fahaizanay manokana manam-pahaizana mba hamindra, hanohana, hanitatra ary hitombo, toerana misy antsika tsara hitari-dalana anao amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana. Na liana amin'ny fifindra-monina, ny fanakambana ary ny fahazoana ianao na mitady ny fanesorana ny fizotranao any aoriana, mitady karama na mpiara-miasa stratejika na mitady ny drafitry ny fifandimbiasan'ny taranaka ho avy, consultation ara-bola sy fanohanana, na mitady serivisy trano sy serivisy mifandraika amin'ny fifindra-monina. na ny fampianarana any ivelany na ny vahaolana IT afaka manampy anao amin'ny serivisy rehetra misy anay hanohanana
Amin'ny maha-olon-tokana na tompon'ny orinasa tsy miankina na orinasam-pifandraisana iray, ny olona rehetra dia tohanana tsy amin'ny fizotran'ny fitantanana ny asa andavan'andro, fa miaraka amin'ny fiantohana ny fahombiazana amin'ny fotoana fohy sy maharitra ho an'ny tenany. Saingy rehefa mitombo ny vidin-javatra ary mitaky ny fanarahan-dalàna miteraka fanamby lehibe kokoa, dia avelanao hanontany tena ianao hoe ahoana ny hanohizanao ho velona - tsy hilazana ny firoboroboana - mandritra izao vanim-potoana vaovao izao.
Ny dingana ataontsika amin'ny dingana vita - manomboka amin'ny fahombiazana
Dingana 1: Fantatrao ny filàn'ny isam-batan'olona / Fianakaviana / Business / orinasa.
Dingana 6: Torohevitra momba ny fitantanam-bola sy ny hetra, raha ilaina.
Tena zava-dehibe tokoa ny fisafidianana ny mpifanaraka tsara amin'ny tanjonao sy ny hetahetanao, miandry izahay ao amin'ny Million Makers mba hahombiazanao.
Ny mpanjifanay dia fianakavianay ary manohana ny mpanjifanay foana izahay miaraka am-piraisan-tsaina sy faharetana hahazoana antoka fa hahomby izy ireo.
Milliona Makers dia mpamatsy vahaolana tsy mijanona, manome vahaolana namboarina sy natao ho an'ny tsirairay, fianakaviana, orin'asa ary orinasa izay manampy anao tsy eo an-trano ihany fa koa amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny raharaha mifandraika amin'ny fifindra-monina, ny fifindram-bola ho an'ny mpampiasa vola, ny fifindra-monina, ny fahazoan-dàlana, ny fahazoan-dàlana , zom-pirenena, fanabeazana iraisam-pirenena, consultant fandraharahana, vahaolana amin'ny asa varotra, fametrahana iraisam-pirenena, vahaolana HR vita manokana, varotra sy fividianana orinasa, CRM Solutions, vavahadin'ny fandoavam-bola, fananganana orinasa any amin'ny sehatra 98, fametrahana ny kaontin'ny banky, fisoratana anarana ara-barotra amin'ny firenena 119 miaraka amin'ny rindranasa tokana. form, licence momba ny asa, birao birao, isa virtoaly, fanitarana iraisampirenena, serivisy ara-dalàna, fanombanana ny fandraharahana, toro-hevitra ara-dalàna, consulting ara-bola, toro-hevitra momba ny fananana, hitodika amin'ny consulatcy, fitaovana ary famatsiam-bola ho an'ny asa, ny fahazotoana sy ny fanarahan-dalàna, dia manokana koa izahay amin'ny fanomezana Vahaolana IT namboarina manokana toy ny fampivoarana tranonkala, Eco vahaolana mmerce, Fivoarana fampiasa, marketing digital, vahaolana amin'ny rindrambaiko ary fampandrosoana ny teknolojia Blockchain mba hilazana vitsy ny vidiny mifaninana.
Ny serivisinay IT dia atolotra ho an'ny mpandraharaha isan-karazany amin'ny karazany sy ny habe rehetra. Manompo ireto indostria manaraka ireto izahay:
Ny fizotran'ny fizotran'ny raharaham-barotra
Ny fotodrafitrasa sy ny fananganana
Famokarana & fikarohana momba ny fambolena
Manome serivisy sy fanohanana amin'ny sehatra voalaza etsy ambany izahay: